Thwebula Trillian 6.2 – Vessoft
Ikhasi elisemthethweni: Trillian
Trillian – isofthiwe yakhelwe for ukuxhumana lula nabantu emhlabeni wonke. Isofthiwe ikuvumela ukuba kanyekanye ukuxhuma imiyalezo Izivumelwano amaningi, njenge Windows Live Messenger, AIM, Yahoo Messenger, ICQ futhi uxhumana Facebook, Twitter, ezine ezilinganayo, LinkedIn, futhi service imeyili. Trillian isekela iningi imisebenzi eyisisekelo: ukwabelana ifayela, umbono kanye ushintsho kolwazi, izilungiselelo zokuphepha, ikhono ukusebenza nge-proxy njll Isofthiwe isikhombikubona enobungane, kwenza ukuxhuma kwalokho futhi ukuguqula ukubukeka usebenzisa izikhumba.
Ikhono kanyekanye ukuxhuma amaningi athandwayo imiyalezo yezifiso
Ukuxoxa zokuxhumana zenhlalo futhi service imeyili
Ikhono ukuxhuma futhi ukwelekelela nokusetshenziswa izikhumba
Amazwana ku Trillian
Trillian software ehlobene
Isiphequluli fast ngokusekelwa ubuchwepheshe banamuhla ukuvakashela amawebhusayithi on the internet. Isofthiwe isekela eziphambili amasayithi uhlelo and omnibox nokusikisela.
I-IMVU – ithuluzi lokuxhumana emhlabeni we-3D obonakalayo. Isoftware isebenzisa izinhlamvu ze-3D ukujwayelana nabasebenzisi.
Isikhungo Sokulawula seCopyTrans – indlela ephumelelayo yokulanda nokuvuselela izinhlelo zokusebenza zamadivayisi we-Apple. Isoftware inika amandla ukulanda uhla lwezinhlelo zokusebenza eziwusizo ngezinhloso ezahlukahlukene.